EWAMT: Manao fihetsiketsehana ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
EWAMT: Manao fihetsiketsehana ny vehivavy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 2:55 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 Martsa 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tonga hatrany Yemen ihany koa ny onjan'ny fitroarana tany Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra. Tamin'ny volana Janoary 2011, Yemenita an'arivony no nanomboka nanao fihetsiketsehana tao an-drenivohitra Sanaa sy tany an-kafa nitaky ny fialàn'ny filoha Ali Abdulla Saleh, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona mahery. Nahafatesana sy nahartrana olona marobe (vakio amin'ny antsipiriany ny fitantarana manokana avy amin'ny Global Voices) ny famoretana nataon'ny miaramila tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny tanàndehibe maro . Ny tena nahavariana dia nihamaro ireo vehivavy mpanao fihetsiketsehana no nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana.
Vehivavy nanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tao amin'ny Oniversiten'i Sana'a. Sarin'i Giulio Petrocco. Fizakàmanana Demotix.
Manana ity fanavaozam-baovao ity i Ghaida'a al Absi avy ao amin'ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’ (EWAMT) avy any Yemen :
Yemenita an'arivony no manao fihetsiketsehana isan'andro ao Yemen. Efa iray volana mahery ny fihetsiketsehana manohitra ny Filoha Ali Abdullah Saleh, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 33 taona. Olona an'arivony ao Taiz, Ibb, Sana'a Aden … sns no mitaky ny fialan'ny filoha. Matetika ny mpanohana ny filoha sy ny jiolahimboto no mitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana, ary nahatonga fahafatesana.
Ny nahafinaritra tamin'ity zava-mitranga tao Yemen ity dia ny fotoana nahitana voalohany ny fihetsiketsehana nokarakaraina tahaka izao. Ohatra, tsy azo atao ny mitondra fitaovam-piadiana ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana, indrindra fa mitam-piadiana ny ankamaroan'ny Yemenita. Manana tobim-pitsaboana, tobim-pampitam-baovao, ary toby ho an'ny fifanakalozan-kevitra izy ireo. Ankoatra izay, ny lehilahy matanjaka indrindra sy ny foko no napetrak'izy ireo teny amin'ny lohalaharana amin'ny fihetsiketsehana, ary ny tanora hafa sy ny vehivavy no manaraka.
Nanome lahatsary momba ny vonoan'olona Zoma izy ireo izay nahitana mpanao fihetsiketsehana miisa 52 namoy ny ainy ary maherin'ny 200 no naratra.
Nizara ny zavatra niainany nandritra ny fitroarana ny mpikambana ao amin'ny tetikasa EWAMT. Nanoratra i Kholoud ao amin'ny tetikasa Ambitious hoe :
Mifindra any amin'ny firenena iray mankany amin'ny firenena iray ny rivotry ny revolisiona sy ny fanovana ary tamin'ity fotoana ity izy dia avy any Tonizia nankany Egypta ary ankehitriny dia mankany Libya, Bahrain sy eto Yemen izay efa akaikin'ny rivotry ny revolisiona mitsoka mba hameno ny havokavoka miandrandra ny fahafahana, ny rehareha ary ny fitroarana manohitra ny kolikoly. Ireo rehetra izay te-hiteny hoe Ampy Izay.. leon'ny fampanantenana mamirapiratra sy poak'aty izahay … Mila ny fiovàna goavana eo amin'ireo mpitondra rehetra izay lasa midika hoe kolikoly, tsy rariny ary fireharehana amin'ny olom-pirenena izahay. Leon'ny mpitsetsitra rà ny vahoaka ary ny rotoroto sy ny ezak'izy ireo mba hamenoana ny filany sy ny fananany manokana …
Indro ny lahatsary iray mampiseho ny famoretana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana:
Nanoratra i Ebtisam Al-Mohmmdy ao amin'ny Yemeni Notes hoe :
Fotoana fohy tao Yemen, voamarika fa ireo mpanao hetsi-panoherana mitady ny fahafahana dia vehivavy mafana fo manoloana ny didy jadona, ny famoretana ary ny fanaparam-pahefana… [..] tsy mihemotra ireo vehivavy ireo na dia dingana iray monja aza, na dia eo aza ny fandrahonana sy ny fanafihana [..] tsy afaka nivoaka nandray anjara aho tamin'ny fihetsiketsehana farany nitaky ny fandrodanana ny rafitra sy hitondrana ny fanovàna eo amin'ny rafitry ny governemanta ao amin'ny firenena saingy reko avy amin'i Almukd fa tonga ny fahafahana manao izany raha sitrapon'Andriamanitra. [..] Fandresena ho an'ny Vahoaka ao Yemen ……. fandresena ho an'ny vehivavy mpitolona.
Marihina eto fa nahazo fandrahonana noho ny andraikiny tao amin'ny hetsi-panoherana ny bilaogera sy ny mpanao gazety Yemenita.
Naneho hevitra tao anaty tononkalo i Nabiha Kadiri raha niresaka momba ny fitroarana.
Nahatsikaritra ny fitombon'ny bilaogera Yemenita, indrindra fa ny vehivavy, izay manandratra ny feony sy maneho ny fomba fijeriny mampiady hevitra izay tsy azo lazaina any an-kafa ny tatitra iray tao amin'ny Yemen Observer.
3 ora izayKaraiba